10/22/12 ~ Myanmar Forward
ပြိုင်ပွဲဝင် နန်းခင်ဇေယျာ ဆုချီးမြှင့်ခြင်း ဗွီဒီယို
Posted by drmyochit Monday, October 22, 2012, under သတင်းများ | No comments
ဂျပန်နိုင်ငံ အိုခိနာဝါ ကျွန်းတွင်ကျင်းပသော ၁၂ ကြိမ်မြောက် Miss International ပွဲမှာ ပထမဆုံး မြန်မာ နိုင်ငံမှ ဝင်ရောက်ယှုဉ်ပြိုင်ခဲ့သူ မနန်းခင်ဇေယျာဟာ Miss International ဆုနဲ့ လွဲချော်ခဲ့ရ ပါ တယ်။ ပြိုင်ပွဲကို ဒီကနေ့ နောက်ဆုံး ကျင်းပခဲ့ပြီး ဆုပေးပွဲကို ဆက်တိုက်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ Miss International စကာတင် ၁၅ ယောက်ကို ရွေးချယ်ခဲ့ပြီး ရွေးချယ်ခံရသော် အလှမယ်များမှာ
ယနေ့ IT ကမ္ဘာတွင် နှစ်နိုင်ငံ စစ် စ ဖြစ်လျှင် ဆိုက်ဘာစစ်ပွဲ က စ ဖြစ်သည်
ကွန်ရက် ထဲသို့ နေ့စဉ် ဝင်ရောက် မွှေနှောက်ကာ နှောင့်ယှက် နေသော ကွန်ပျူတာ ဟက်ကာ များမှာ အီရန် လူမျိုးများ ဖြစ်သည်ဟု အစ္စရေး ဝန်ကြီး ချုပ် ဘန်ဂျမင်နေ တန်ယာဟုမှ ပြီးခဲ့သည့် အောက်တို ဘာလ ၁၅ ရက်နေ့ က ပြောဆို ခဲ့သည်။ “ကျွန်တော် တို့ရဲ့ ဆိုက်ဘာ ကွန်ရက်ထဲကို တိုက်ခိုက် ခံရတာတွေ ပိုပိုများ လာတယ်။ ကျွန်တော့်တို့ အစိုးရပိုင် ကွန်ပျူတာ တွေကို ဖျက်ဆီးဖို့ ကြိုးစားတဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေ နေ့တိုင်း ရှိနေတယ်” ဟု နေတန်ယာဟု က အစ္စရေး အစိုးရ အဖွဲ့ဝင် သီတင်းပတ် အစည်း အဝေး၌ ပြောကြား ခဲ့သည်။
ဆီးရီးယားနိုင်ငံ တွင် ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွား
Posted by drmyochit Monday, October 22, 2012, under နိုင်ငံတကာသတင်းများ | No comments
ဆီးရီးယားနိုင်ငံ ဒမတ်စကက်မြို့ဟောင်းရှိ Bab Touma တွင် ပြင်းထန်သည့် ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပွားသည်။ ဆီးရီးယားသမ္မတ ဘရှားအာဆတ်နှင့် ကုလသမဂ္ဂငြိမ်းချမ်းရေး သံတမန် လက်ခ်ဒါ ဘရီဟီမီတို့ ဒမတ် စကက်မြို့တော်တွင် ယနေ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးစဉ် Bab Touma တွင် ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခြင်း ဖြစ်သည်။ ပုံတွင် ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားအပြီး မီးခိုးလုံးများ ထွက်ပေါ်လာသည်ကို တွေ့ရသည်။ ပေါက်ကွဲမှုမှာ ကားဗုံး ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပြီး အနည်ဆုံး လူ ၁၀ ဦးသေဆုံးကာ ဒါဇင်နှင့်ချီ၍ ဒဏ်ရာရရှိကြောင်းသိရှိရသည်။
ဒီနေရာမှာ ရက်ရက် စက်စက် စစ်ဆေးခဲ့ကြတယ်
( ၁ ) ကိုကျော်ဝေ၏လက်ကို ဒစ်တိုနေတာတပ်ကာဝါယာရှော့ဖြင့် ဖေါက်ခွဲခဲ့သည့်အတွက် လက်ကောက် ၀တ်မှပြတ် ခဲ့ရသည်။
( ၂ ) ကိုအောင်ဖိုး( ခ ) အေးသက်လတ်၏ ခြေထောက်ကို ဒစ်တိုနေတာတပ်ကာဝါယာရှော့ဖြင့် ဖေါက် ခွဲခဲ့သည့် အတွက် ခြေမ၊ခြေညှိုး၊ခြေခလယ်၊ပြတ်တောက်ခဲ့ရသည်။အဖမ်းခံအချုပ်သား (၂၀ ) ခန့်က လက်တွင် ဒစ်တို နေတာ ချည်ထားခံရပြီး ၀ိုင်းထိုင်ကြည့်ခဲ့ရသည်။
( စေခိုင်းသူ-မျိုးဝင်း၊လှဆိုင်း၊သန်းဇော်၊ ) ပြန်လည်ဖြတ်တောက်ချုပ်ပေးခဲ့ရသူ - (ဆေးဆရာမသိမ့်ဆွေ)
( ၃ ) ကိုထွန်းအောင်ကျော်နှင့် ကိုချိုကြီး အားလက်ဝါးကပ်တိုင်တွင် ချည်နှောင်ထားခဲ့ပြီး ကိုထွန်းအောင်ကျော် ၏လက်ဝါးနှစ်ဘက်အား ၄လက္မ သံဖြင့်ရိုက်သွင်းခဲ့ကြသည်။ ကိုချိုကြီး ခြေထောက် ရှေ့တွင် မီးဖိုထားပြီး ဝေဒနာခံစားအောင်လုပ်ခဲ့ကြသည်။ ကိုဘိုဘို(ခ) မိုးကျော်သူ၊ ကိုရဲလင်း +၂ဦး ကထိုင်ကြည့်ခဲ့ရသည်။
Posted by drmyochit Monday, October 22, 2012, under ဆောင်းပါး | No comments
ကချင်ပြည်နယ် ဖားကန့်ဒေသမှာ အောက်တိုဘာလ ၂၄ ရက်နေ့ ကျရောက်မယ့် ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂနေ့ မှာ ငြိမ်းချမ်း ရေးအထိမ်းအမှတ်စာသားတွေပါတဲ့ ကပ်ခွာတွေ နေရာအနှံ့ကပ်ကြမယ်လို့သိရပါတယ်။ ကချင် ပြည်နယ် အပါအဝင် မြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံး ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး ဆောင်ရွက်ကြ တာ ဖြစ်ပြီး အဲဒီအစီအစဉ်ကို ဖားကန့်မြို့နယ် ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားတွေ နဲ့ တနယ်လုံးက ဒေသခံ တွေ ပါဝင်ကြ လိမ့်မယ် လို့ အဲဒီပွဲကို ကမကထပြုလုပ်သူတဦးဖြစ်တဲ့ ဦးခင်မောင်ဝင်း က ပြောပါတယ်။
Posted by drmyochit Monday, October 22, 2012, under ပြည်တွင်းသတင်းများ | No comments
မိမိတို့ အစိုးရလက်ထက်တွင် တည်ဆောက်ရေး စီမံကိန်းများကို ပွင့်လင်း မြင်သာအောင် ဆောင် ရွက်မည် ဖြစ်ကြောင်း၊တိုင်းရင်းသားများနှင့် ပတ်သက်သော လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခများကို ချုပ်ငြိမ်း အောင် အဆင့် သုံးဆင့်ဖြင့် ဆောင်ရွက်နေကြောင်း၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဆောင်ရွက်ရာတွင် Peace Center တစ်ခုကို မကြာမီ ဖွင့်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခများ ဖြစ်ပွားရာ ဒေသ၌ အေးချမ်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ကချင်ပြည်နယ် အတွင်း ပဋိပက္ခများက ဆုံးရှုံးမှု များကြောင်း၊ ဒေသတွင်း တိုင်းရင်းသားများ အိမ်ရာများကို စွန့်ခွာ ပြေးသွား ခြင်းက စိတ်မကောင်းဖွယ် ဖြစ်ကြောင်း၊ ကချင်ဒေသကိုငြိမ်းချမ်း စေလိုကြောင်း၊ ငြိမ်းချမ်းရေး နှင့် ပတ်သက်ပြီး မျက်နှာချင်းဆိုင် ဆွေးနွေးပွဲများ၊ ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ခြင်းများ လုပ်ဆောင် နိုင်ပြီ ဆိုပါက မကြာမီတွင် ငြိမ်းချမ်းရေးကို မျှော်လင့်နိုင်မည်ဟု နိုင်ငံတော် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က ပြောပါ သည်။
KIA နှင့် အစိုးရတပ်တိုက်ပွဲဖြစ် KIA မှ ကောင်ရာစခန်းအား စွန့်ခွာ၍ ထွက်ပြေး
KIA စခန်းတစ်ခုတွင် တာဝန်ကျနေသော KIA တပ်သားနှစ်ဦး
အောက်တိုဘာလ(၁၉)ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ဗမာအစိုးရတပ်များအား KIA တပ်မဟာ(၅) ရင်း(၃)မှ တပ်ဖွဲ့ဝင် များမှ ကောင်ရာစခန်းပေါ်မှ လက်နက်ကြီးများဖြင့် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့၇ာ အစိုးရဘက်မှ ပြန်လည်တိုက်ခိုက်ခဲ့ သဖြင့် KIA များ ကောင်ရာစခန်းအား စွန့်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ရကြောင်း သိရပါတယ်။
KIA တပ်များမှ ကောင်ရာစခန်းမှနေ၍ အောက်တိုဘာလ(၁၉)ရက်နေ့ နံနက်(၉)နာရီခန့်တွင် ချီတက် လာသော ဗမာအစိုရတပ်အား စောင့်ကြို၍ လက်နက်ကြီးများဖြင့် စတင်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ ဗမာ စစ်ကြောင်း မှလည်း လက်နက်ကြီးများဖြင့် ပြန်လည်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သဖြင့် တစ်နာရီလောက် တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားခဲ့ ပြီးနောက် ဗမာစစ်တပ် များက စခန်းပေါ်အား တက်ရောက် တိုက်ခိုက် သိမ်းပိုက် ခဲ့သဖြင့် KIA တပ်များသည် ထိခိုက် ကျဆုံးများစွာဖြင့် စခန်းစွန့်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရပါ တယ်။ သို့သော် ထိခိုက် ကျဆုံးမှု အသေးစိတ် ကိုတော့ မသိရ သေးပေ။
“စစ်တတ်ကရွာကို ပတ်ပြီး ထွက်လာတာ တောင်ယာခင်းထဲကိုဖြတ်တဲ့အချိန်မှာ KIA လက်နက် ကြီးတွေနဲ့ စပစ် တာ၊ ဒါပေမယ့်မမှန်ဘူး ဒါနဲ့ စစ်တပ်ကလည်း ပြန်ပစ်တယ် ပြီးတော့ စခန်းတက် သိမ်းတာ ဘဲ” ဟု မျက်မြင် တွေ့လိုက် သူ ရွာသားတစ်ဦးက ဆိုပါတယ်။
ထို့ပြင် အဆိုပါ ကောင်ရာစခန်းမှ စခန်းမှူးသည် ဒေသခံရွာသားများအား အတင်း အဓမ္မ လူသစ် ဖမ်းဆီး ခြင်း၊ ဒေသခံ ရွာသူရွာသားများအား စခန်းသို့ခေါ်ယူ၍ စခန်းပြင်ခိုင်းခြင်းများ ဆောင်ရွက်မှုရှိသဖြင့် ဒေသခံ များ မှ လည်း မကျေမနပ်ဖြစ်နေကြောင်း သိရပါတယ်။
“ စစ်တပ်ကလာသိမ်းသွားတာ ကောင်းတယ်။ အဲဒီစခန်းမှူးကြောင့် ရွာတွေမှာ အေးအေးချမ်းချမ်း မနေရ ဘူး။ ယောင်္ကျား တွေဆို ပုန်းနေရတယ်။ နောက်ပြီး နမ့်မလီချောင်းဘေးက ငှက်ပျောစိုက်ခင်းက ရခိုင် (၁၅)ယောက် ကိုဖမ်း သွားသေးတယ်” ဟု ဒေသခံအမျိုးသမီးတစ်ဦးက ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဖားကန့်မြို့နယ် ဟောင်ပါး-ဆယ်ဇင်းသွား ကားလမ်းမှာ KIA မိုင်းထောင်နေ
KIA တပ်မဟာ(၂) လက်အောက်ခံ ရင်း(၆)မှ အရာခံဗိုလ်တစ်ဦးပါဝင်သော (၅)ဦးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့သည် အောက်တို ဘာလ(၂၀)ရက်နေ့ နံနက်(၉)နာရီတွင် ဖားကန့်မြို့နယ် ဟောင်ပါးကျေးရွာအုပ်စု နန့်ပင် ကျေးရွာ နှင့် ရွှေတော် ကျေးရွာကြား ဟောင်းပါး-ဆယ်ဇင်းသွား ကားလမ်း၏ အနောက်ဘက်ခြမ်း ကာလမ်း နှင့် ခြောက်ပေခန့် အကွာတွင် မိုင်းများ ထောင်နေကြောင်း ဒေသခံတစ်ဦးက သတင်းပေး ပို့လာပါ တယ်။
မည်သည့်နိုင်ငံကမှ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်လွှမ်းမိုးမှု အဖြစ်မခံနိုင်ကြောင်း နိုင်ငံတော်သမ္မတပြောကြား
မည်သည့်နိုင်ငံကမှ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်လွှမ်းမိုးမှုအဖြစ်မခံနိုင်ေ ကြာင်း နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က အောက်တိုဘာလ၂၁ ရက်နေ့တွင်နေပြည်ေ တာ် မီဒီယာတွေ့ဆုံပွဲ၌ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ နိုင်ငံတော် သမ္မတ သည် Myanmar Independent ဂျာနယ်မှမေးမြန်းခဲ့သော "တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ ဖက်စပ်လုပ်တဲ့ စီမံကိန်း တော်တော် များများကို မြန်မာပြည်သူတွေက မကျေနပ်ကြဘူး။သမ္မတကြီးကိုယ်တိုင်လည်း မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကို ရပ်ထားတယ်။ အခု လက်ပံ တောင်းတောင် စီမံကိန်းကိုလည်း ပြည်သူတွေက ဆန့်ကျင်တယ်။
၂၁ . ၁၀. ၂၀၁၂ သတင်း လက်ရှိ အရေးကြီး မင်းပြားမြို့သတင်း
၂၁.၁၀.၂၀၁၂ ရက် ညဉ့် ၁၁း၀၀ နာရီပတ်ဝန် ကျင်တွင် မင်းပြားမြို့ အဝေးပြေး ကားဂိတ်နားအနီ ပိုက်သည် ရွာတွင် ဘင်္ဂလီကုလား မိမိရွာကို မီးရှုံးပြီး ထွက်ပြေးလျှက် ရှိပါသည်။ ယခုအခါ မီးသည် အချိန်ပြင်းစွာ လောင်လျှက်ရှိပြီး မင်းပြားမြို့ တခုလုံးမှာ စိုးရိမ်လျှက် ရှိပါသည်။ အခြေအနေကို လုံခြုံရေး ရဲများမှ သေနတ်များ ပစ်ဖောက်ပြီး ထိန်းသိမ်း နေရသည်ဟု သိရှိရပါသည်။
ယေရှုခရစ်တော်ပုံရိပ်တွေ့ ခဲ့ သော်လည်းဘာသာမဲ့ တစ်ဦးအတွက်တော့ တန်ဖိုးရှိတာမသိရှာ
ရေခဲသေတ္တာ၏နောက်ပိုင်းတွင် ယေရှု ခရစ်တော် ပုံရိပ်တွေ့ ခဲ့ လိုက်ရ သဖြင့် ဘာသာ မဲ့ တစ်ဦး အနေ ဖြင့်တော် တော်အံ့ အားသင့် သွားခဲ့ ရပါတယ်...
ကလေး သုံးယောက် ဖခင်ဖြစ်သည့် ကင်နီအစ်ဒင်ဒင် အမည်ရှိ အမျိူးသားဟာ ဟန်းဘေး အရပ်ရှိ ၎င်း၏ နေအိမ်တွင် ရေခဲသေတ္တာ အဟောင်း တစ်လုံးလား သူ၏ဦးလေးဖြစ်သူနှင့် အတူရွေ့ နေစဉ် ကယ်တင်ရှင်၊ယေရှုခရစ်တော်၏ပုံရိပ်နှင့် သဏ္ဍာန်တူသည့် မှိုတက်နေသောဂမ္ဘီရဆန်သည့် အကွက်တစ်ခုတွေ့ ရှိ ခဲ့ ပါတယ်....
သမ္မတ အိမ်တော်မှာ ပြုလုပ်တဲ့ ဒီကနေ့ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲမှာတော့ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က လိုအပ်ရင် နောက်ထပ် သမ္မတ သက်တမ်း တာဝန် ထမ်းဆောင်မယ်လို့ ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဒီကနေ့ တိုင်း ရင်းသား ငြိမ်းချမ်းရေး၊ လူမှုရေးနဲ့၊ မကြာခင်က ပြန်လည် ရောက်ရှိလာတဲ့ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု ခရီး စဉ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီးလည်း သတင်းထောက်တွေ မေးမြန်းခဲ့တာတွေကို လည်း ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ မသိင်္ဂီ ထိုက် က ဆက်သွယ် မေးမြန်းထားပါတယ်။
ထောက်လှမ်းရေးအရာရှိ သေဆုံးမှု ဘေရွတ်မှာ ဆန္ဒပြ
သောကြာနေ့က လုပ်ကြံခံ ခဲ့ရတဲ့ လက်ဘနွန် ပြည်တွင်း ထောက်လှမ်းရေး အရာရှိချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ပ်ကြီး ဝစ်ဆမ် အဲလ် ဟတ်ဆန်ရဲ့ ဈာပန အခမ်းအနားကို လာရောက် ကြသူတွေဟာ ဒေါသတကြီးနဲ့ ဘေရွတ်မြို လယ်က အစိုးရရုံး ဌာနချုပ်ဆီကို ချီတက် ဆန္ဒပြဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြ ပါတယ်။
မာင်တောမြို့နယ် လူစုလူဝေး လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့ဝင်များက သေနတ် ပစ်ပြီး လူစုခွဲ
ရခိုင်ပြည်နယ် အနောက်ဘက် မောင်တော မြို့နယ်တွင် ယမန်နေ့က လူစုလူဝေးဖြစ်လာသည့် အတွက် လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့ဝင်များက သေနတ် မိုးပေါ် ပစ်ဖောက်ပြီးလူစု ခွဲလိုက်ရကြောင်း သိရှိရသည်။ မောင်းတော မြို့နယ် ဗောဓိကုန်းကျေးရွာ အနီးတွင် မွတ်ဆလင်များမှ လူစုရာမှ လူစုကွဲရန် စစ်တပ်မှ သေနတ် ၄ ချက် ပစ်ဖောက်ခဲ့ကြောင်း ကျေးရွာသား တဦးက ပြောသည်။
နန်းခင်ဇေယျာ Miss Internet ဆု ရပြီ
Posted by drmyochit Monday, October 22, 2012, under ဓါတ်ပုံသတင်း | No comments
မြန်မာပြည်မှာ အင်တာနက် မြန်နှုန်း နိမ့်ပေမယ့် အိုကီနာဝါကျွန်း ၂၀၁၂ နိုင်ငံတကာမယ်ပြိုင်ပွဲမှာ မြန်မာ ပြည်ကိုယ်စားပြု ၀င်ပြိုင်တဲ့ နန်းခင်ဇေယျာကတော့ Miss Internet ဆု ရရှိသွားပါပြီ။ သူ့ကို မဲပေးကြတဲ့ အနယ်နယ်က မြန်မာပြည် သားတို့ရဲ့ အားပေးမှုကြောင့် ဒီဆု ရရှိသွားတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ကချင်ပြည်နယ် ဖားကန့်ဒေသအတွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးလိုလားသူများသည် စက်တင်ဘာလ ၁၇ ရက်နေ့မှ စကာ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများအဖွဲ့များနှင့် ပေါင်းစည်းကာ ကချင်ပြည်နယ် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ဖားကန့်ဒေ သငြိမ်းချမ်းရေး အတွက် ဒေသခံပြည်သူများက စုပေါင်းလက်မှတ်ရေးထိုး တောင်းဆိုမှုမှာ အောက် တိုဘာလ ၁၀ ရက်နေ့တွင် လူဦးရေ တစ်သိန်း တစ်သောင်းကျော် ရောက်ရှိခဲ့ကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရသည်။
မြန်မာ တိုင်းရင်းသား ၁၀၀ ခန့်က အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု နယူးယောက်မြို့ရှိ OIC ရုံးချုပ်ရှေ့သို့ သွားရောက်ပြီး အောက်တို ဘာလ ၂၀ ရက်နေ့က ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်ဟု သတင်း ရရှိသည်။ ဆန္ဒပြပွဲတွင် မြန်မာ နိုင်ငံတွင် Organization of Islamic Cooperation (OIC) အနေဖြင့် ရုံးခွဲများဖွင့်လှစ်ရန် စီစဉ် ဆောင်ရွက် နေခြင်း အပေါ် ကန့် ကွက်ခဲ့ ကြပြီး၊ ဆန္ဒပြသူများက မြန်မာပြည်သူလူထု၏ သဘောထားကို လေးစား လိုက်နာရန် OIC ကို တောင်းဆိုခဲ့ကြသည်။
အင်းလျားကန်ပေါင်တွင်ဆိုင်ကယ်များဖြင့် အုပ်စုဖွဲ့ပြီး မင်းမဲ့စရိုက်ဆန်စွာ ရိုက်နှက် ထိုးကြိတ်ခဲ့သူအချို့ကို ဖမ်းဆီးရမိပြီ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ကမာရွတ်မြို့နယ်ရှိ အင်းလျား ကန်ပေါင် သို့ ဆိုင်ကယ် များဖြင့် အုပ်စုဖွဲ့ လာ ရောက်ပြီး လုံခြုံရေး ၀န်ထမ်းနှင့် ဆိုင်ဝန် ထမ်းများကို မင်းမဲ့ စရိုက် ဆန်စွာ ၀ိုင်းဝန်း ရိုက်နှက် ထိုးကြိတ်သူ အချို့ ကို ဖမ်းမိပြီ ဖြစ်ကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
ပုသိမ်မြို့နယ် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှ ပါတီဝင် ငါးရာဦးခန့် နှုတ်ထွက်ပွဲကျင်းပ မည်ဟုသိရ
ပါတီတွင်းဗဟိုဦးစီးစနစ် ကျင့်သုံးနေ မှုများအား လက်မခံနိုင်တော့၍ ပုသိမ်မြုိ့ စကားဝါလမ်း တွင်ဖွင့်လှစ်ထားသည့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ရုံးမှ ပါတီဝင် ငါးရာဦးခန့်သည် လာမည့် အောက်တို ဘာလ ၂၇ ရက်နေ့တွင် ပါတီဆိုင်းဘုတ် ဖြုတ်ချခြင်းနှင့် ပါတီမှနှုတ်ထွက်ပွဲ ကျင်းပသွား မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
မောင်တော သစ်တောဦးစီးဌာန ရုံးမှ စာရေးမ တစ်ဦးအား အရေးယူခြင်း ၊ ပြောင်းရွေ့ ခြင်းမရှိသေး (ပေးစာ)
မောင်တောခရိုင်ရုးံ မှ စာရေးမ ဒေါ်နွယ်နွယ်ဦး သည် လက်ထောက် ညွန်ကြား ရေးမှူး ဦးမောင်မောင်နိုင်ကို တိုင်ကြား စာနှင့်ပတ် သက်၍ ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကြီး သို့ ပြောင်းရွေ့ ထွက်ခွာ သွားခြင်း မရှိ ပါ၊ အထက် လူကြီး များ၏ အမိန့်ကို မနာခံခြင်း ၊လေးစားလိ်ုက်နာမှု မရှိဘဲ ကလန်ကဆန် ပြုလုပ်နေသည် ဟု သိရပါသည်၊၊
အမေရိကပြည်ထောင်စု နယူးယောက်မြို့ရှိ -OIC- ရုံးချုပ်ရှေ့မှာ ရခိုင်သားတွေ စိန်ခေါ်ဆန္ဒပြ ကန့်ကွက် ကြပြီ
ဤနေ့တွင် နယူးယောက်မြို့ နေ ရခိုင် လူမျိုးများနှင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုများ၊ အဖွဲ့ အစည်းများမှ တာဝန်ရှိ သူများက အင်တိုက်အားတိုက် -OIC- ရုံးခမ်းဖွင့်လှစ်မည့် အဂေးနှင့် ပတ်သက်၍ ဆန္ဒပြကန့်ကွက်ပွဲသို့ လာခဲ့ကြသည်။ ၄င်း ဆန္ဒပြပွဲတွင် ရခိုင်လူမျိုးများ သဘာပတိ ဦးခိုင်အောင်ကျော်မှ အဖွင့်အမှာ စကား ပြောကြားခဲ့သည်။
ယနေ့ သံတွဲတွင် ဘင်္ဂါလီလူမျိုးများအား မိခင်နိုင်ငံသို့ပို့ ဆောင်ရန်နဲ့ OIC ရုံးဖွင့်ရန်ကန့် ကွက်ကြောင်း ဆန္ဒဖော်ထုတ်
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းတွင် ဘင်္ဂါလီလူမျိုး များအား မိခင်နိုင်ငံသို့မဟုတ် တတိယနိုင် ငံသို့ ပြန်လည် ပို့ဆောင်ရန် နဲ့ OIC ရုံးဖွင့်ရန် ကန့်ကွက်ကြောင်း အတွက် သံတွဲမြို့တွင် အောက်တို ဘာလ ၂၁ရက်နေ့ လည် ၁၂နာရီတွင် ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည် ဟုသတင်းရရှိသည်။
နိုင်ငံများ စုပေါင်း ဖွဲ့စည်းထားသော OIC(Origanization of The Islamic Cooperation) က မြန်မာနိုင်ငံ တွင်ရုံး စိုက်မည် ဟု သတင်း များထွက်ပေါ် လာသည့် အတွက် ရန်ကုန်၊ မန္တလေး နှင့် ရခိုင် ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့ တို့တွင် OIC ကို ကန့်ကွက် ဆန္ဒ ဖော်ထုတ်မှု များ ဆက်တိုက် ဖြစ်ပေါ် ခဲ့သော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံ တွင် OIC ရုံးကို လုံးဝ ဖွင့်လှစ်ခွင့် ပြုမည် မဟုတ်ကြောင်း နိုင်ငံတော် သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန် ကယနေ့ နေပြည်တော် တွင် ပြုလုပ်သော သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ တွင် ကတိပေး ပြောကြားသည်။
OIC ဆက်ဆံရေးရုံးဖွင့်ခွင့်မပြုသည့် အပေါ်သံတွဲမြို့တွင် ထောက်ခံဆန္ဒပြ (သတင်းအပြည့်အစုံ)
IC ဆက်ဆံ ရေးရုံး ဖွင့်မည့် ကိစ္စနှင့်ပတ် သက်ပြီး လူထု ဆန္ဒ ဖော်ထုတ် ပွဲကို သံတွဲမြို့တွင် ယနေ့ နေ့နေ့ လယ် ၁နာရီက ၃နာရီ အထိပြု လုပ်ခဲ့ ကြသည်။ ယနေ့ ဆန္ဒထုတ်ဖေါ်မှုဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ၏ တရားဝင် ခွင့်ပြု ချက်ဖြင့် ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပြီး လူထုအင်အား ၆၀၀၀ ခန့်ပါဝင်ကြသည်။
မပုံမြို့တွင် မွတ်ဆလင် ရပ်ကွက် မြို့ပြင်ထုတ်ရန် ဆန္ဒပြ တောင်းဆို
ရခိုင်ပြည်နယ် မြေပုံမြို့တွင် ဒေသခံ ရခိုင်တိုင်း ရင်းသားများက ယနေ့ ဆန္ဒပြပွဲ တစ်ခု ပြုလုပ်ရာမြို့ထဲရှိ မွတ်ဆ လင် ရပ်ကွက်ကို မြို့ပြင်သို့ ထုတ်ပေးရန် တောင်းဆို ဆန္ဒ ပြခဲ့ ကြသည်ဟု သိရ သည်။၎င်း ဆန္ဒ ဖေါ်ထုတ် ပွဲကို ရဟန်း တော်များနှင့် ဒေသခံ မြို့မိ မြို့ဖများမှ ယနေ့ နံနက် ၈ နာရီခွဲတွင် ပြု လုပ်ခဲ့ ကြသည်ဟု သတင်း ရရှိသည်။ ဆန္ဒဖေါ်ထုတ်ပွဲ ပြုလုပ်ရသည့် ရည်ရွက်ချက်နှင့်ပတ်သက်ပြီး နေပြည် တော်တွင် ရောက်ရှိနေ သည့် မြေပုံမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးဖေသန်း က နိရဉ္စရာသို့ ပြောသည်။
ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး ဒဂုံ ဆိပ်ကမ်း မြို့နယ်၊ ရွှေပြည်သာ နဲ့ လှိုင်သာ ယာမြို့နယ် တွေက အလုပ် သမား သမဂ္ဂ အဖွဲ့ အစည်း တွေက သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ် အသီး သီးမှာ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခွင့် လျှောက် ထား တာကို အာဏာပိုင် တွေကက ခွင့်ပြု လိုက်ပြီလို့ သိရပါတယ်။
လက်ပန်တောင်းတောင် ပြည်သူ့ညီလာခံရောက် သတင်းမီဒီယာသမားတဦး လုံခြုံရေးအခြေအနေစိုးရိမ်ရ
လက်ပန် တောင်းတောင် ကြေးနီ စီမံကိန်း ရပ်တန့်ရေး၊ လက်ပန် တောင်းတောင် ပြည်သူ့ ညီလာ ခံသို့ ရောက်ရှိ သတင်း ယူနေသူ သတင်း မီဒီယာ သမား တဦး၏ လုံခြုံရေး အခြေ အနေမှာ စိုးရိမ်ဖွယ် ရှိကြောင်း လက်ပန် တောင်းတောင် ဒေသသို့ ရောက်ရှိ နေသော ရန်ကုန် နိုင်ငံရေး သမားတဦးက ပြောကြား သည်။
ကချင် လွတ်လပ် ရေးအဖွဲ့ KIO နှင့် အစိုးရတပ်များ အကြား တိုက်ခိုက်မှုများ ပြန်လည် ဖြစ်ပွား လာခဲ့ သည့် တနှစ်ကျော် ကာလအတွင်း မတရား အသင်း ဆက်သွယ်မှု ပုဒ်မ ၁၇ (၁) ဖြင့် ကချင်ပြည်နယ်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းမှ ဒေသခံပြည် သူများ ဖမ်းဆီးခံရသူ အနည်းဆုံး ၃၂ ဦးခန့် ထောင်ဒဏ် ချမှတ် ခံရပြီး ဖြစ်ကြောင်း ရှေ့နေ ဦးဂျီမာခါးက ပြောသည်။
မင်းပြားမြို့ မီးရှို့တိုက်ခိုက်မူနှင့် နောက်ဆုံး အခြေအနေ
ရခိုင်ပြည်နယ် မင်းပြားမြို့တွင် ယမန်နေ့ ညနေပိုင်းမှ စတင်ပြီး မတည်ငြိမ်မူ ဖြစ်ပွားရာ အိမ်မီးရှို့မူများ ပေါ်ပေါက် ခဲ့ကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။ စုစုပေါင်း ပိုက်သည်ရွာမှ မွတ်ဆလင် အိမ် ၁၈ ဆောင် မီးထဲပါသွားသည်ဟု မင်းပြား မြို့နယ် ပြည်နယ် လွှတ်တော် အမတ် ဦးသာကျော်က ပြောသည်။ “ ပိုက်သည်ရွာက အိမ် ၁၈ ဆောင် မီးထဲပါ သွားပါ တယ်။ ဖြစ် တာက ညနေ ၉ နာရီခန့်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့အချင်းချင်း အရက်သောက် ရန်ဖြစ်ရာကနေ ရခိုင် တစ်ယောက် ကို ဂျင်ဂလိနဲ့ ပစ်ရာကနေ စဖြစ်တာ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ဦးသာကျော်က ပြောသည်။
ယနေ့ IT ကမ္ဘာတွင် နှစ်နိုင်ငံ စစ် စ ဖြစ်လျှင် ဆိုက်...
KIA နှင့် အစိုးရတပ်တိုက်ပွဲဖြစ် KIA မှ ကောင်ရာစခန်...
ဖားကန့်မြို့နယ် ဟောင်ပါး-ဆယ်ဇင်းသွား ကားလမ်းမှာ KI...
မည်သည့်နိုင်ငံကမှ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်လွှမ်းမိုးမှု အဖြ...
ရခိုင်ပြည်နယ် မင်းပြားမြို့နယ် ပန်းမြောင်းစံပြကျေး...
ယေရှုခရစ်တော်ပုံရိပ်တွေ့ ခဲ့ သော်လည်းဘာသာမဲ့ တစ်ဦး...
မာင်တောမြို့နယ် လူစုလူဝေး လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့ဝင်မျာ...
ဖားကန့်ဒေသနှင့် ကချင်ပြည်နယ် ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ြ...
ပုသိမ်မြို့နယ် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှ ပါတ...
မောင်တော သစ်တောဦးစီးဌာန ရုံးမှ စာရေးမ တစ်ဦးအား အ...
အမေရိကပြည်ထောင်စု နယူးယောက်မြို့ရှိ -OIC- ရုံးချုပ...
ယနေ့ သံတွဲတွင် ဘင်္ဂါလီလူမျိုးများအား မိခင်နိုင်ငံသိ...
မြန်မာနိုင်ငံတွင် OIC ရုံး ဖွင့်ခွင့် ပေးမည်မဟုတ် ...
OIC ဆက်ဆံရေးရုံးဖွင့်ခွင့်မပြုသည့် အပေါ်သံတွဲမြို့တ...
မပုံမြို့တွင် မွတ်ဆလင် ရပ်ကွက် မြို့ပြင်ထုတ်ရန် ဆန...
လက်ပန်တောင်းတောင် ပြည်သူ့ညီလာခံရောက် သတင်းမီဒီယာသမ...
မင်းပြားမြို့ မီးရှို့တိုက်ခိုက်မူနှင့် နောက်ဆုံး ...